ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စာရိုက်သူများ သတိထား”
ညီမဖတ်တုန်းက ဆက်စပ်လို့ မရဘူးဖြစ်သွားတယ် ..း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာနဲ့ စာရိုက်တင်ပေးသူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ..း))
ကိုပေါ ခုမှ ဇာတ်ရေ လည်တော့တယ် ကျေးဇူး ဖော်ဝေါ့တွေကတော့ ရတာမနဲဘူးး) ဒီလိုလူတွေလဲ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီ
အမှားကိုမှန်စေချင်တဲ့စေတနာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုပေါရေ။
သဇင်တို့လည်း ဖတ်ဖတ်ချင်း ဇာတ်ရေမလည်ဘူးဖြစ်သွားတာ။
ဆရာမောင်စိန်ရေးတဲ့ ကာတွန်းပါ။း)
ကျေးဇူးပဲ ကိုပေါရေ ..
ကျမလဲ ဖတ်တုန်းက ဘယ်လိုပါလိမ့် တခုခုတော့ တခုခုပဲ ကိုယ်ကပဲ တော်တော်ညံ့လို့ သဘောမပေါက်တာလားလို့ ထင်နေတာ။
ကျမကတော့ ဖော်ဝေါ့မေးလ်မှာ ဖတ်တာမဟုတ်ဘူး မာယာ အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖတ်ရတာပါ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့။ အခုမှ ရှင်းသွားတော့တယ်။ ကျေးဇူးပဲ ကိုပေါရေ။
I started my first year BE course at MIT (Mandalay) in Nov 1995. Then we transferred to YIT at the end of Dec 1995. My first day at YIT (Yangon)was 1-1-1996 and This speaking was surely between 1-1-1996 and 28-3-1996, my first year term. I went back to my home town on 28-3-1996. I noted this date in my 1996 diary but unfortunately my dairy is at my native home. (The 75th year University memorial building (diamond building) was opened on 7-12-1996 8am and around 10-12-1996 , we all went back to our home for3years holiday)
It is very different from what I have read before.
At first I dont understand it much.
ကာတွန်းကို မကြည့်ရသေးပေမဲ့ ကိုပေါရေးတာနဲ့ ရယ်သွားပါတယ်။ ပေဖူးလွှာထဲမှာ ဆရာမောင်စိန်ရေးတဲ့ လူကြီးခန်းဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေ သိပ်ကြိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ကျနော့်တုန်းက ဖတ်နေရင်... အဲဒီနေရာကြီးက တခုခုဟာ နေသလိုဖြစ်နေလို့
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပဉ္စမမြောက် အကွက် ကို
လူနာက... မျက်နှာငယ်လေး နဲ့...
"သေချာရဲ့လား ဆရာရယ်... " ဆိုပြီး ပြန်မေးပါတယ်
လို့ ဖြည့်ပြီး သာဆက်ဖတ်လိုက်တော့ တယ်..
တကယ်က လူနာက ပြန်အော် တာကိုး..... ... ဟီး...
နားမလည်လို.ပြန်ဖတ်တော.လည်း အူလယ်လယ်ဖြစ်သွားတာ ခုမှဘဲရှင်းတော.တယ်...thks
အဲဒီလိုနေတဲ့ ကာတွန်းကွက်ကို ကျနော်လည်း နည်းနည်းတော့ရိပ်မိပါတယ်။ လှဲနေတဲ့လူနာက တခုခု လုပ်လိုက်လို့ ဒါမှမဟုတ် အသံပေးလိုက်လို့ သူ့မိန်းမက ဟောက်လိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်လို့။ အခုလို အတိအကျသိရတာ ပိုသေချာသွားတာပေါ့။